juillet | 2020 | InfoKmada
Mpivarotra zava-pisotro : mitohy ny fanakatonana ireo mandika lalàna
InfoKmada - 31 juillet 2020 0
Taorian’ny fanapahan-kevitra nolazain’ny Praiminisitra lehiben’ny Governemanta ny Alahady teo, mitaraina ireo tompona toeram-pivarotana zava-pisotro ara-dalàna. Lafo hoy izy ireo ny hetra aloan’izy ireo saingy mahatsiaro tena ho ankilabao ireo mpandraharaha ireo. Etsy ankilany, nanamafy ny avy eo anivon’ny polisim-pirenena fa tsy miova ny baiko hatreto. Mihidy avokoa ireo izay mbola tsy voalaza tao anatin’ny fepetra ny Alahady teo.
Ambatondrazaka : zazavavy 16 taona bevohokan’ny rainy
Any Ambatondrazaka, vehivavy kely 16 taona no naolan’ny Rainy ka bevohoka ankehitriny. Efa lehibe ny kibony vao nentina tany amin’ny renin-jaza ary fantatra fa mitoe-jaza. Nitory ny vadiny, izay nahavanon-doza avy hatrany ny renim-pianakaviana.
Mpampanofa vatana : sahirana amin’ny fanatanterahana ny asany
Misedra olana amin’ny fanatanterahana ny asany ireo mpampanofa vatana eto an-drenivohitra manolohana ny valan’aretina coronavirus. Isan’ny amin’izany ny fotoana voafetra ahafahan’izy ireo manao izany, eo ihany koa ny tsy fahampiany fitaovana ho azy ireo amin’ny fanarahana ny fepetra ara-pahalasamana amin’izao fisihan’ny covid-19 izao.
Nosy Be : mety hisokatra ny volana Oktobra ny sidina
Notanterahina androany tao Nosy Be ny fihaonan’ny FIlohan’ny Repoblikan’i Madagasikara sy ireo mpandraharaha ara-toekarena misehatra eo amin’ny fizahantany. Teboka maro no nangatahan’ireto farany vahaolana amin’izao fiatrehana ny valan’aretina izao sy ny fanarenana indray ny toekarena aorian’ny Krizy ara-pahasalamana. Tsy maintsy ho jerena avokoa izany hoy ny filoha ary isan’ny hatao laharam-pahamehana amin’izany ny fizahantany ao Nosy Be. Mety hisokatra ny volana Oktobra ho avy izao ny sidina ao an-toerana.
Nambaran’ny minisiteran’ny fitaterana fa isan’ireo fifanarahana afaka haverina dinihana ny fifanarahan’i Madagasikara tamin’ny Ravinala Airports, amin’izao fotoana hametrahana ny paikady hanarenana ny kaompania Air Madagascar izao. Ny Ravinala Airports izay mitantana ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosy Be, nanomboka ny taona 2016 ary mandritry ny 28 taona. Ity farany ihany koa izay maka « redevances » lafo indrindra aty amin’ny Ranomasimbe Indiana.
Tsena isan-kerinandro : tsy maintsy mifarana amin’ny 1 ora tolakandro
Na niverina aza ny tsena isan-kerinandro eto amin’ny fiadidian’ny tanànan’Antananarivo, maro ireo fepetra napetraka hoy ny talen’ny tsena. Misy ny mpanra-maso amin’ny fampiharana izany ary amin’ny 1 ora tolakandro tsy maintsy madio ny toerana avy nivarotana.
Distrikan’i SAMBAVA : natokana hanamboarana ny lalana ny CLD 2019
InfoKmada - 30 juillet 2020 0
Natokana ho an’ny fanamboaran-dalana hahafahana mamoaka ny vokatra Vanille ny volan’ny CLD 2019 ao amin’ny Distrikan’i Sambava hoy ny Solombavambahoaka voafidy tany an-toerana. Fanamboarana ny lalana izay tafiditra ao anaty laharam-pahamehan’ny mpitondra fanjakana hahafahana manova ny fiainan’ireo mpamokatra sy hahafahana mampandroso ny firenena.
CUA : nisitraka fampitaovana avy amin’ny Frantsay
Taorian’ny fampitaovana ny Zandarimariam-pirenena ho fanatsarana ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara, nanolotra fanomezana ho an’ny Kaominina Antananarivo renivohitra ihany koa ny Région îles de France, tamin’ny alalan’ny Masoivoho Frantsay, monina sy miasa eto Madagasikara androany. Ny eo anivon’ny Kaominina izay isan’ireo mifanerasera betsaka amin’ny olona noho ny asany andavanandro, indrindra amin’izao fiparitahan’ny Coronavirus izao.
Famokarana Oxygène : tokony hirosoan’ny fitondram-panjakana
Tokony hirosoan’ny fanjakana ny fananganana orinasa mamokatra oxygène ilaina eny anivon’ny tobim-pahasalamana raha ny fanahoan-kevitr’ireo mpitsabo androany. Ahiana tsy aharaka ny filana ny oxygène misy ankehitriny raha toa ka mitombo ny isan’ireo marary mafy noho ity valan’aretina Cronavirus ity raha ny fanazavana.
Ady amin’ny Covid-19 : nivoaka ny tatitry ny vola efa voaray
ivoaka ny tatitry ny famatsiam-bolan’I Madagasikara entina miady amin’ny fipariahan’ny valanaretina Covid-19. Amin’ny ankapobeny, avy amin’ny FMI ny ampahany betsaka amin’izany raha ny tatitra navoakan’ny minisiteran’ny toekarena sy ny vola omaly. Tsy mbola mamaly kosa ny fitakian’ny fiarahamonim-pirenena mivondrona eo anivon’ny STEF na ny Suivi de la Transparence et de l’Effectivité des Fonds alloués aux réponses à la Covid-19 ity tatitra ity raha ny fanadihadiana natao androany noho ny tsy fahampian’ny votoatiny.